Koobka Qaramada Africa oo furmay iyo Mucjiso ka dhacday, Milan oo dhulka ku jiiday Juventus, Barcelona iyo Real madrid oo isku jawaabay, « SAWNEWS NETWORK
« MA LAGA YAABAA INAY REER AWDAL SOO CESHADAAN BQORTOOYADDI (ADAL EMPIRE 13 CENRTY)
Gudidda Ururka Awdal Road Race shirkii ugu horeeyey sanadkan cusub 2010 yeeshay »
Koobka Qaramada Africa oo furmay iyo Mucjiso ka dhacday, Milan oo dhulka ku jiiday Juventus, Barcelona iyo Real madrid oo isku jawaabay,
Posted by Sawnews.tk on January 12, 2010
Luanda:-Waxaa xalay ka furmay magaalada Luanda ee caasimada dalka Angola Koobka Qaramada Qaaramada Africa iyadoo lagu furay xulalka xulka marti gelinaya ee Angola kuwaas oo soo bandhigay ciyaar lala yaabay.
Xulka Mali ayaa muujiyey geesinimo dheeraad ah marki uu iska soo magay 4 gool oo ay kaga hormartay Angola,waxaana afarta gool ay keensadeen ciyaartooyda Mali ciyaarta oo ay ka harsaneyd 11 daqiiqo.
Kooxda Angola ayaa qeybti hore ee ciyaarta ku hogaamineysay 2-0 waxaana labada gool is raacsaday ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee Flavio,qeybti labaad ayey hogaanka sii xoojisteen marki ciyaaryahanada Gilberto iyo Manucho ay min gool kala dhaliyeen.
Laakin Mali isma dhiibin waxaana hurdada ka kiciyey taageerayaasha ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona Seydou Keita kaasoo darbo dheer ku laaday shabaqa Angola,wax yar kadibna Frederic Kanoute ayaa madaxa la helay kubada kahor inta uusan Keita labeysan,waxaase goolka bareejada saxiixay Mustapha Yatabare dhamaadki ciyaarta.
Ciyaarta oo lagu qabtay garoonka 11 November Stadium waxaa ka hor inta aysan bilaaban lagu soo bandhigay ciyaaro hidaha iyo dhaqanka ah iyo bandhig aad loo soo diyaariyey taasoo loogu tala galay furitaanka ciyaarta.
Waxaa daawanayey madaxweynaha Angola,Madaxweynaha South Africa iyo madax kale iyo sidoo kale ergooyin ka kala socday xiriirada CAF iyo FIFA,iyadoo ka hor bilowga ciyaarta loo aamusay qadar daqiiqad ah sadex ruux oo ka tirsanaa xulka Togo kuwaas oo Jimcihi lagu weeraray dalka Angola.
Galabta iyo fiidnimada caawa ayaa waxaa dhici doona laba ciyaarood oo kala ah Malawi vs Algeria oo dhaceysa galabta iyo Ivory Coast vs Burkina Faso.
Milan oo dhulka ku jiiday kooxda Juventus
MILAN:- Laba gool uu uu saxiixay Ronaldinho iyo gool uu dhaliyey Alessandro Nesta ayey isaga reebtay AC Milan kooxda kusoo xigtay ee Juventus ciyaar ka dhacday garoonka Juve ee magaalada Turino.
Guushaasi 3-0 ah ayaa sii xumeysay xaalada tababaraha dhalinyarada ah ee kooxda Juventus Ciro Ferrara iyada oo laga yaabo in booskiisa loo qaato tababaraha xulka Russia Guus Hiddink kaasoo ay Juve kula jirto wada xaajood.
Alessandro Nesta ayaa daba mariyey lugtiisa midig marki uu ka faa,ideystay kooone uu soo laaday Pirlo goolkaas ayeyna ku dhamaatay qeybti hore ee ciyaarta,hase yeeshee gelinki labaad ayey Milan heshay fursado cairiiri ahaa kuwaas oo ay ka faa,ideystay.
Ronaldinho ayaa labada gool saxiixay goolkiisa hore oo uu dhaliyey daqiiqadii 72-aad wuxu ku dhaliyey madaxa goolka labaadna wuxuu daba mariyey goolhaye Buffon daqiiqadii 88-aad waxaana uu ahaa baas uu ka helay Beckham.
Kooxda uu leyliyo macallin Leonardo waxa ay u muuqataa mid talaabo dheer usoo qaadeysa dhinaca iyo hogaanka,waxaana haatan ay usoo jirsatay kooxda Inter 8 dhibcood iyadoo uu u harsanyahay kulan ka baaqday oo ay la ciyaari laheyd kooxda Fiorentia waxaana kulankaasi ay Milan ciyaari doontaa 24-ka bishan.
Waxaase loolanka horyaalka ee u dhaxeeya Inter iyo AC Milan uu kala cadaan doona hal asbuuc kadib marka ay ku kulmaan garoonka San Siro kulanka loo yaqaano Derbi Dela Modena oo ah kulanka labada kooxood.
Dhinaca kalana kooxda Napoliaaa soo ciriirsatay booska afraad iyada oo haatan la dhibca ah kooxda Juventus,shalay ayey 1-0 kaga adkaatay kooxda Sampdoria guulka calanka waxaa u saxiixay weeraryahanka reer Argentine German Denis.
Napoli lagama badin 12-ki kulan ee ugu danbeeyey waxaana ay uga mahadinayaan guulahaasi is daba jooga ah macallin Mazzarri kaasoo booska kala wareegay tababarihi la ceyriyey ee Roberto Donadoni oo kooxda ka tagay bishii October,Mazzarri ayaa kooxda waqti fiican lasoo qaatay isaga oo ciyaaryahan ah sanadihi Sideetameeyadii markaas oo uu Napoli joogay Diego Maradona.
Fiorentina,ayaa iyaduna u han qal taageysa mar labaad koobka kooxaha Horyaalada Yurub ee Champions League waxa ay rabtaa in ay ciriirsato kaalinta afraad shalay ayey 2-1 ku cuntay kooxda Bari.
Genoa 2-0 ay kaga badisay Catania , Livorno ayaa Parma ku dubatay 2-1, Udinese ayaa bar baro 1-1 ah la qeybsatay kooxda Lazio halka kooxdaCagliari ay 1-0 uga badisay kooxda Bologna.
Barcelona iyo real oo isku jawaabay
MADRID:- Kooxaha FC Barcelona iyo Real Madrid oo ah labada kooxood ee ugu caansanhoryaalka La Lega ee dalka Spain ayaa wali isu jawaabaya kadib marki ay xalay guulo kasoo hooyeen kulamo ay ciyaareen.
Naadiga Barca iyada libin muuqata ay ka keeneen kooxda Tenerife oo ay ku dar dareen 5-0 halka kooxda Real Madrid ay iyaduna 2-0 kaga faraxalatay Real Mallorc.
Naadiga Barcelona oo ah horyaalka dalkaasi ayaa sadex ka mid ah goolasha waxaa ku baashaalay Leo Messi,halka Carles Puyol uu ku darsaday hal gool ka hor inta uusan Luca iska dhalin gool.
Guushaasi ayaa Barca dib ugu soo celisay hogaanka horyaalka kadib marki kooxda Real Madrid ay hogaanka qabsatay qadar laba saacadood ah marki ay Mallorca dharbaaxo ku dhifatay.
Real waxa goolasha u kala dhaliyey Gonzalo Higuainiyo Esteban Granero waxaana kulankaasi uu ka dhacay garoonka ay ku caan baxday Real ee Santiago Bernabeu Stadium.
Ciyaaraha kalana kooxda Deportivo la Corua ayaa u dhaqaaqday kaalinta afraad kadib markii gool uu daqiiqadii 50-aad uu siiyey ciyaaryayahan Juan Rodriguez ay ku xalaaleesteen sadexdi dhibcood kulan ay la qaateen kooxda Osasuna.
Valencia ayaa ku raaxeysaneysa kaalinteeda sadexaad kadib marki ay 3-1 dhabarka u saartay kooxda hoose ee Xerez.
by Muhayadiin Ibraahim Qawrax
This entry was posted on January 12, 2010 at 12:23 am	and is filed under Sports. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.